राेचक खबर Archives - Page 86 of 87 - Purbeli News
Trending # राशिफल664# मृत्यु213# पक्राउ158# मृत्यु149# एनसेल83# कोरोना सङ्क्रमण81# पक्राउ70# केपी शर्मा ओली65
समाजको पछिल्लो अवस्थाले नेपालमा जिगोलो (पुरुष वेश्या)को संख्या बढ्दै…
विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको अध्ययन अनुसार नेपालमा २ लाखको हाराहारीमा यौन व्यवसायी रहेको अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् झन्डै २५ हजार पुरुष यौन व्यवसायी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । केहि बर्ष देखि पोखरामा बस्दै आएका बिपिन (नाम परिवर्तन )को जीवन फेरिएको छ । मध्य पहाडी जिल्लाका उनी जागिर खोज्दै २ बर्ष अगाडि पोखरा आएका थिए । डान्स क...
माेरङ धनपालगढीमा राति अनौठो चिज बलेपछि हेर्नेको भिड
माेरङ / मोरङको कसेनीमा रहेको पर्यटकिय स्थल धनपालगढीमा साँझको समयमा रुखमा उज्यालो बल्न थालेपछि हेर्नेको भिड लाग्न थालेको छ । साँझ ७ बजे देखी चार पाँच ओटा रुखमा पिलिक पिलिक उज्यालो बल्न थाले पछि हेर्नेको भिड लाग्न थालेको हो । जुनकीरी जस्तै एकै साथ रुखमा बल्छ बेलबारी वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष बिश्वबन्धु बस्नेतले भने दैविक शत्तिको उत्पति भएको भन्दै हेर्न...
यस्ताे देश जहाँ बिवाह अघि नै छाेरीलार्इ अरू युवकहरूसंग याैन सम्पर्क गर्ने अनुमति दिइन्छ
बुधबार, जेठ १६, २०७५
एजेन्सी । कम्बोडियामा छोरीलाई आफ्नो जीवन साथी रोज्न एकभन्दा बढी पुरुषसंगका यौन सम्बन्ध राख्न अभिभावकले अनुमति दिने गर्छन् । छोरीहरूको सजिलोका लागि बुवाआमाले नै घरभन्दा केही टाढा प्रेम झुपडी बनाइदिन्छन् । यसमध्येको एउटा परम्परा कम्बोडियामा छ । जहाँ युवतीहरूलाई धेरैजना पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो लागि उपयुक्त लोग्ने छान्ने स्वतन्त्रता छ । क...
यो देशमा युवतीलाई कर्के नजरले पनि हेर्न पाइदैन , जिस्काउन त परै जाअाेस
एजेन्सी । स्विडेनको संसद्ले जोडीबीच सहमतिबेगर गरिने यौनसम्पर्कलाई बलात्कार मानिने नयाँ कानून पारित गरेको छ । जबर्जस्तीबाहेक करकापमा गरिने यौनसम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानिने नयाँ कानूनलाई संसद्ले पारित गरेको हो । नयाँ कानुनको अर्थ सेक्स गर्नुपूर्व पार्टनरले मौखिक वा शारीरिक रूपमा सहमति जनाउनुपर्छ । र, कसैले सेक्सका लागि प्रस्ताव गरेमा अर्को व्...
यसकारण टिक्दैन प्रेम विवाह
एजेन्सी । प्रेम विवाह आजको जमानामा निकै साधारण कुरा हो । तर यो शब्द सुन्नमा जति रमाइलो लाग्छ त्यती नै धेरै प्रेम कहिलेकाँही गलाको पासो बन्ने गर्दछ । एक शोधका अनुसार प्रेम विवाह गर्ने ८० प्रतिशत मानिसहरुको सम्बन्ध केही समयपछि सिद्धिने गर्दछ । आखिर यस्तो के गल्तीका कारण सम्बन्ध टुट्छ, यसबारे जानकारी लिऔं । धेरैजसो प्रेमविवाहमा विवाहभन्दा पहिले पुरुष...
यी हुन् पुरुषले सुधार्नै पर्ने यी सात बानी
पुरुषको धेरै आनीबानीहरु स्पर्म काउन्ट घटाउन जिम्मेबार हुन्छन् । चिकित्सकहरुका अनुसार शरिरको तापक्रमको तुलनामा अण्डकोशको थैलीको तापक्रम करिब एक डिग्री कम हुन्छ । अण्डकोश थैलीको तापक्रम बढ्नाले स्पर्म काउन्ट कम हुन सक्छ । यसैगरी स्पर्म काउन्टमा तनावले पनि नकरात्मक असर पार्छ । ह्युमन रिप्रोडक्सनमा प्रकाशित एक रिसर्च अनुसार अधिकांश पुरुषहरुलाई आफ्नो प...
घरमा कमिला आउनुले यस्तो अर्थ दिन्छ, यी ५ जीव घरमा पसे यस्तो हुन्छ
शास्त्र र पुराणहरुमा हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका कही यस्ता आदतहरुको दाबी गरिएको छ, जुन हेर्दा सामान्य लागछ, तर वास्तवमा हामीलाई आउँन लागेको समयको बारेमा । यदि तपाई पनि शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईका लागि केही जानकारी निम्न छन् १. कमिला – शास्त्रअनुसार, यदि अचानक घरमा कमिलाले दाना ओसारेको देखे वा ताती देखिएमा, यसले निकट भविष्यमा केही नराम्रो हु...
अाफ्नै देशमा केहि गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यसरी आफैले दर्ता गर्न सकिन्छ कम्पनी
पछिल्लो समय मानिसहरु अरुको काम छोडेर आफै केहि गर्ने सोचका साथ कम्पनी दर्ता गरि व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रमा लाग्ने क्रम बढ्दै गएको छ । कम्पनी दर्ता कसरी गर्ने, के कस्ता डकुमेन्टहरु आवश्यक पर्छ थाहा नहुँदा पैसा खर्च गरेर वकिल, तथा अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ तर राम्रोसंग कम्पनी दर्ता सम्बधि अध्ययन गर्ने र जानकारी लिने हो भने आफै...
भैँसीले ‘मान्छे जस्तै बच्चा जन्माएपछि …
एजेन्सी । पछिल्लो दिनमा थाइल्याण्डमा एउटा भैँसीले मान्छे जस्तै जिउडाल भएको पाडो जन्माएको छ । मान्छेजस्तै जिउडाल, ढाँचा तथा स्वरुप भएको बच्चा भैँसीले जन्माउँदा मानिसहरु अचम्ममा नपर्ने कुरा भएन । टाढा-टाढाबाट मान्छेहरु त्यो विचित्र हेर्न आए । भैँसीले बच्चा जन्माएको केही बेरमै उक्त मानव स्वरुप पाडोको मृत्यु भएको थियो । तर मानिसहरुमा उक्त पाडो हेर्ने ...
सेक्स गर्दैगरेको आवाज आएपछि टेनिस खेल नै स्थगित ! (भिडियो सहित)
एजेन्सी | सेक्सकाे बेला एकजना महिलाले निकालेको ठूलो आवाजका कारण चलिरहेको टेबलटेनिस खेल नै स्थगित गर्नुपरेको छ । घटना अमेरिकाको हो । अमेरिकाको फ्लोरिडमा चलिरहेको सारासोटा ओपन टेनिस अन्तरगतको एक खेल सम्भोगका बेला महिलाले निकालेको आवाजका कारण केहीबेर स्थगित भएको छ । प्रतियोगिताअन्तरगत फ्रान्सेस टिओफे र मिचेल क्रुगरबीच खेल चलिरहेको थियो । खेल चलिर...